काँग्रेसले गर्याे सरकारको कामको प्रशंसा – onlinedarpan:
Posted on December 2, 2018 Author onlinedarpanComment(0) 78 Views
काठमाडौं: प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याउनु सुखद् भएको टिप्पणी गरेको छ ।
नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको आज बसेको बैठकले सरकारले हालै घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुखद र सकारात्मक रहेको जनाएको हो ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आउनु सुखद भएको पार्टीको निष्कर्ष रहेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए । काँग्रेसले सामाजिक सुरक्षा योजना सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई शुभकामना समेत दिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि आवश्यक ऐन आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारलेनै ल्याएको काँग्रेसको दावी छ ।
Posted on November 2, 2018 November 2, 2018 Author onlinedarpan
Share9TweetGoogle+Pin09sharesशेयर बजारका लगानीकर्तालाई कुनै पनि भ्रमममा नपर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले आग्रह गरेको छ । बोर्डले दोस्रो बजारका लगानीकर्तालाई भ्रममा नपरी सुझबुझपूर्ण ढङ्गले लगानी गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो । बजार हल्लाका भरमा नभई आधारभूत तथा प्राविधिक विश्लेषणसहित सुझबुझपूर्ण तवरले शेयर बजारमा लगानी गर्न बोर्डले विज्ञप्ति नै जारी गरेर सुझाव दिएको हो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…
Share0TweetGoogle+Pin00sharesसर्लाही- आफ्नो लागी गाडी किन्न नगरपालिकाबाट छुट्याएको पैसाबाट बागमती नगरपालिकाका मेयरले जनतालाई पानी ट्यांकी किनेर स्वच्छ पानीको व्यवस्था गरेका छन् । मेयर भरत कुमार थापाले आफु चड्ने गाडी खरिद गर्न छुट्याएको ३० लाख रुपैँयाले जनतालाई पानी ढुवानी गर्ने ट्यांकर खरिद गरेका हुन् । पानी ट्यांकरले मंगलबारबाट जनताको घर दैलोमै निःशुल्क पानी पुर्याउन सुरु गरेको छ विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…
Share14TweetGoogle+Pin014shares१४ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले १४ सहसचिवहरुको काज सरुवा गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ तथा प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयमा कार्यरत सहसचिवहरुको सरुवा गरेको हो । सरुवा भएकाहरुलाई रमाना पत्रसमेत दिइसकिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । हेर्नुहोस् को-कहाँ सरुवा भए ? क्रम संख्या नाम थर पहिले अहिले १. प्रदीप राज कँडेल विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…
आज – १६ मंसिर २०७५ आइतवारको राशिफल
नेपाली गाेरुकाे तस्करी बंगलादेशसम्म, तस्कर र स्थानीयबीच झडप